भिडियो: खराब पावरपोइन्ट | Martech Zone
भिडियो: खराब PowerPoint
सोमवार, जुलाई 23, 2007 Douglas Karr
टोपी टिप गर्न मार्केटिंग र टेक्नोलोजी
जुलाई,, २०१ at 24::2007। बिहान
डरलाग्दो, कति मान्य अंकहरू छन्। केही समय अघि मैले केही कार्यालयका व्यक्तिहरूलाई तिनीहरूका प्रस्तुतीकरणहरू सुधार गर्न मद्दत गरें। अचम्म लाग्ने कतिजना सोच्दछन् कि हरेक बोलेको शब्द साँच्चिकै पर्दामा हुनु पर्छ?
केवल धेरै जानकारी सहितको ग्राफहरू राम्रो ग्राफहरू हुन्?
एक जहिले कम्प्युटरमा कति टाइपफेसहरू छन् देखाउनु पर्छ?
रंगहरू व्यापक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ?
पृष्ठभूमिहरू सकेसम्म व्याकुल हुनुपर्दछ?
र, त्यसैले ...